Zarganar of Burma & Burmese People: Human Rights Day - 60 Years
Posted by Phan Mee Ain - Literature Lovers at 11:24 PM
ဒီ ဓါတ်ပုံလေးကို ကျမ စမြင်ခဲ့ဖူးတာ facebook ပေါ်မှာပါ.. အမှတ်မထင်တွေ.ပြီး တယောက်ယောက်က ဖန်တီးတီထွင် ထားတယ်လို.ပဲ ထင်ခဲ့မိတယ်... ဒီလိုနေရင်း တနေ. သူငယ်ချင်းတယောက်က BBC လင့်လေး လာပေးပါတယ်.. အဲ့ဒီတော့မှပဲ ဒါဟာ သတင်းအနေနဲ. အတည်ပြုတင်ထားတာမှန်းသိလိုက်ရပါတယ်.. ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးလို. ကျမ လက်ခံယုံကြည်ထားပါတယ်.. သူတို.ဟာ ရခိုင် မူဆလင်တွေပါလို. ပြောဦးမလား.. ဘယ်ရခိုင်ကို သွားမေးမေး ဒီလူတွေဟာ ရခိုင်မဟုတ်ပါဘူးလို. ငြင်းကြပါလိမ့်မယ်... ကျမ သူငယ်ချင်း ရခိုင်မလေးကိုယ်တိုင်ပြောပြဖူးလို. ကျမ ယုံကြည်ပါတယ်..
ဒီ ကုလားစပ် မူဆလင်တွေ ဘယ်ကလာပါသလဲ ... ဖြစ်နိုင်တာက အင်္ဂလိပ်လက်ထက် က ကျွန်အနေနဲ.ခေါ်လာလို. ဖြစ်စေ ၊ စစ်အတွင်း အသုံးချဖို. ခေါ်လာလို.ဖြစ်စေ ပါလာခဲ့ပြီး စစ်ပြီး တကွဲတပြားစီ နီးစပ်ရာ နိုင်ငံဝင်နေရင်း ကျန်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်... သူတို.နဲ. ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ သမိုင်းအထောက်အထားကို ဒီမှာ ဖတ်မိပါတယ်... မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူမျိူးပေါင်း ၁၃၅ မျိုးကျော်ရှိပါတယ်.. သို.သော် ရိုဟင်ဂျာမပါပါ...ဒါဟာ တကယ့် ပြည်တွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လက်ခံထားတဲ့ အမှန်တရားတခုပါ...
ဒီ ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စ ပြည်ပမှာ တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားလာတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးခိုလှုံဖို.က စတယ်လို.ပဲ ဆိုရပါမယ်... လူ.အခွင့်အရေးကို အလေးထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတွေမှာ ဒီကိစ္စဟာ ပြသာနာကြီး တခုပါပဲ.. ဒီအချက်ကြောင့်လည်း တိုင်းပြည်ပျောက်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ အဖြစ် ခံယူသူတွေ တဖြည်းဖြည်း များလာကြတာပါ... တကယ့် ကုလား မူဆလင်အစစ်ကလည်း နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် ရချင်တော့ လူမျိုးပျောက်ပြီး ရိုဟင်ဂျာ ဖြစ်သွားကြပါတော့တယ်... ဒါကို ဘီဘီစီက မြန်မာတွေ မသိတာလား မသိချင်ယောင်ဆောင်တာလားတော့ ကျမ လည်း မသိပါ.. ရိုဟင်ဂျာ ဟန်ဆောင်သူတွေဆိုတာကလည်း ဒီလူတွေနဲ. မျက်နှာနာနေကြရတော့ ကုလားကို ရိုဟင်ဂျာ မဟုတ်ပါဘူးလို. ပြောရင် အပြန်အလှန် ထိုးနှက်ကြတော့မှာ မို.လို. အချင်းချင်း ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေကြတယ်လို. ထင်ပါတယ်.... ဒီတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေက မေးတဲ့အခါ လွဲချော်မှု.ကြီးတွေ ဖြစ်လာရတော့တာပါပဲ...အပွင့်လင်းဆုံးပြောရရင် နိုင်ငံရေးလုပ်ပါ ... အစိုးရကို ထိုးနှက်ပါ.. သို.သော် ဒီလိုမျိုး ကိုယ့်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတွေကို ထိခိုက်စေမယ်ဆိုရင်တော့ ရှောင်ကြဉ်ကြရပါမယ်... ကိုယ်နေရာ ရဖို. ကိုယ်အဆင်ပြေဖို. ကိုယ့်အမျိုးကို ချမနင်းပါနဲ. အမျိုး မပျောက်ပါစေနဲ.... နောက်ဆုံးအနေနဲ. ပြောရရင် ဒီ ဓါတ်ပုံ ထွက်လာတာသည် နိုင်ငံခြားသား မှာ အပြစ်မရှိ ..ဘာလို.လဲ ဆိုတော့ သူက မေးမြန်းရရှိမှု.တွေပေါ် မူတည် ရေးသား ထုတ်ဝေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်.. တကယ်က ကိုယ့်လူမျိုးတွေ အသုံးမကျတာ... ဒီ မျိုးချစ်စိတ် မရှိသူတွေ ကြောင့် ရခိုင်လူမျိုးတွေ နေရာမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေ ဖြစ်ရတာ .. BBC က မြန်မာ လူမျိုးတွေ ရှက်တတ်သင့်တယ်.. ရခိုင်လူမျိုးတွေကို တောင်းပန်သင့်ပါတယ်..